Indlela yokuphatha i-tonsillitis engapheliyo kubantwana
Umqala wam ... Uyazi ukuba kunjalo, ephaphathekile, kodwa ekhuni, okanye ebomvu. Ingane sele ibe i-ace in the rinse? Ixesha lokuthi uhlehlise i-tonsillitis - ukuvuvukala okungapheliyo kweetoni. Ngokuphathelele okokugula kunye nendlela yokuphatha i-tonsillitis engapheliyo umntwana kwaye iya kuxutyushwa ngezantsi.
Ngaba uhlala unomntwana ogulayo? Kwaye akuqhelekanga i-ORVI, idlula iintsuku eziliqela, kunye ne-angina? Qinisekisa ukutyelela i-lora efanelekileyo. Inokwenzeka ukuba, ugqirha uya kuhlola "i-tonsillitis engapheliyo." Oku kuthetha ukuba iitoni zentsana ziye zavavanywa kumsebenzi wemikhosi. Ngubani oza kuphumelela: usulelo okanye ukhuseleko lomzimba?
1. Ii-Pathogens - iibhaktheriya
Umbhobho obomvu akusoloko ibonisa ukuba i-tonsillitis ikhoyo kwiimvumba. Kwakuqhelekile ukuba: ukuvuvukala kweetoni kubungakanani bhaktheriya kuphela. Nangona kunjalo, ngoku oogqirha bathi izifo zomqala zomntwana zibangelwa ziintsholongwane. Ngenxa yoko, ngokukhawuleza xa umzimba uvelisa izikhusela ezikhuselayo, imeko yeetoni zihlala ziqhelekileyo. Ngokuphathelele i-tonsillitis, iintsholongwane azibandakani naso. Iibhaktheriya zizalisa kwi-amygdala yomntwana. Kwaye umsebenzi wakho kukunciphisa intshaba. Isinyathelo sokuqala kukuhlwayela iifoni kwi microflora. Uhlalutyo luza kubonakalisa i-agent engumzekelo we-angina. Ngokuqhelekileyo ezi zi-streptococci zamaqela A ne-B, staphylococci. Uphononongo luya kugqiba kuphela uhlobo lweebhaktheriya, kodwa nolwaphulo lwayo kumachiza omzimba. Oku kuya kuvumela ugqirha ukuba angaqapheli kwiziko lekhofi xa ekhetha unyango lwe-antibacterial, kodwa ngokukhawuleza wakhethe izidakamizwa ezaneleyo.
2. Isongela iingxaki
I-tonsillitis engapheliyo kumntwana akumele ibe yinto engayinakunyulwa. Phakathi kweluhlu oluphawulekayo lweengxaki zebhaktriya zesi sifo se-rheumatism kunye nokuphazanyiswa kwenkqubo ye-cardiovascular. Umqala wesifo somzimba, xa ushiywe ungagqithwanga, ubeka ingozi yokuphuhlisa i-abscess emqaleni. Yingakho ukunyanzeliswa kwe-tonsillitis engapheliyo kufuneka iphathwe ngokukhawuleza kwaye ngokubanzi. Ewe, ukuba umntwana sele sele ufunde ukuxubusha izisombululo ze-antiseptic kwaye akanakucinga ukubopha kumunina womnyoko, oya kuwugcoba umlenze wakhe. Izindlela zokuchithwa kwe-disinfection yomlomo womlomo ziphumelelayo ekuqaleni. Kodwa ukuba iisoni zivele zakha i-abscess, ke ngaphandle kwexesha elide le-antibiotics ayikwazi ukwenza. Ukuxhalabisa kwetonsillitis yimeko xa kulunge ukufumana iyeza elinamandla kunengxaki.
3. Ixhomekeka kwi-immunity
Umsebenzi oyintloko wabazali ukukhusela ukubola kwesifo. I-tonsillitis iya kwiifomu ezingapheliyo, ukuba i-anginas inepropati yokuziphinda. Oku kuxhomekeke ngqo kwiimeko zokuzikhusela komntwana. Izindlela eziphumelelayo zokuqinisa ukhuseleko lomzimba - ezemidlalo, ukuqina okunengqiqo, ukutya okunokulinganisela. Tshintsha indlela yakho yobomi!
4. Ukunyanga i-tonsillitis engapheliyo kufuneka idibaniswe
Tune kwixesha elide lonyango. Nangona usana aluzange lube neyantlukwano kwiinyanga eziliqela, umntu makangasoloko ekhumbula engqondweni yakhe: iitoni ziyinxalenye ebuthathaka. Inkqubo yokukhusela yokuphindaphindiwe kwakhona kathathu ngonyaka. Iquka ukuhlamba iitoni kunye nezicombululo nge-antibiotics, i-physiotherapy, iziyobisi ukwenzela ukuphucula umzimba.
5. I-Homeopathy Works
Awufuni ukujongana namachiza omzimba? Zama olunye unyango. Amayeza omdabu ayabalalisa iimpawu. I-Homeopathy iphilisa isiguli. Isenzo salo sijoliswe kumntu ngamnye, kwaye kungekhona kwisifo esifanayo. Kwimeko yonyango lwe-tonsillitis engapheliyo kumntwana, iipasta ze-homeopathic ziye zazibonakalisa ezivela kwicala elifanelekileyo.
6. Intsimi yengqondo
Iingxaki ngomqala zingase zibe nesimo sengqondo esisemgangathweni. Udla uthi kwintsana: "Vala!", "Musa ukuqonda!"? Iingcali zengqondo zithi abazali bathabatha izikhokelo zabazali ngokwenene. Kwaye ukuba i-ENT ingenayo ibango ekhethekileyo yokubamba iziqu, kodwa i-angina iphindwa ngokuphindaphindiweyo, umama noTata baqonda ukuba bahlalutye amagama abo. Ukongezelela, musa ukunyathela kwiimeko zempilo yengane! Ngamanye amaxesha, enye ingcali ithi umntwana une-tonsillitis, kanti enye ayiboni nantoni emlonyeni wesigulane esincinane. Zama ukushiya lo mncinane wedwa, ukuze umzimba uncede ukuhlangabezana neebhaktheriya ezibi.
7. Ukusebenza kakuhle
Ngaba iisoni zifanele zihlukane? Kule nto inokudibanisa: uyingxenye kunye nokuqhwala komqala. Izibonakaliso ezingenasiphelo ze-tonsillectomy - ukususwa kweetoni-ngaphezu kwezine ezine-streptococcal angina ngonyaka. Unayo ngaphantsi? Ngenxa yoko, kunengqiqo ukukhuphisana ngeetoni. Emva koko, bakhonza njengesithintelo esingokwemvelo kwintsholongwane kwi-bronchi kunye nemiphophu kwaye benza umsebenzi obalulekileyo wokuzimela nge-immunological. Kodwa kuphela xa bephilile. Iingxowa ezihlala zivuthayo azikwazi ukuhlangabezana nemisebenzi yazo yokukhusela kwaye ayiyi kuzisa into ethile kodwa ingozi. Kucetyiswa ukuba ulinde ngokusebenza ukuba umntwana uneminyaka engaphantsi kwe-4-5 ubudala. Kukho na ithuba lokuba uya kuhlangabezana ne-tonsillitis eneendlela ezizimeleyo. Kwaye iisoni ziyakunceda kumntwana. Xa uzama ukunyanga i-tonsillitis engapheliyo kumntwana akukho nto inceda? Kuyavela ukuba iingenelelo zongenelelo lophulo olungaphezu komngcipheko.
Ukudandatheka kunye neempawu zayo kubantwana
Indlela yokwenza umntwana athathe iyeza?
Kungcono kakhulu ukulala umntwana ngomlotha okanye ngaphandle
Unyango lwebruxism kubantwana
Ukuhlaselwa kweentlanzi: iimpawu, iimpawu, indlela yokunyanga
Isisu esisisigxina kunye nesinqe esincinci
Isonka se-Adzimka (Adzimka)
Indlela yokwenza umntu aqonde ukuba ndiyamdinga
IHoroscope yowesifazane waseCapricorn ngoJuni 2017
Iipropati eziwusizo zepenji yamatope
Ukukhethwa kwewayini elibomvu akuwona umsebenzi olula